Pasipaoro tsara indrindra hananana: Japon, Singapore, Korea atsimo, Alemana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Pasipaoro tsara indrindra hananana: Japon, Singapore, Korea atsimo, Alemana
Ny pasipaoro amerikana na UK dia manome fahazoan-dàlana hahazo firenena visa 75 maimaimpoana fotsiny. Izany dia mitondra ny sandan'ny pasipaoro amerikana amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny Gambia.
Ny Global Mobility Report 2021 Q1 dia manasongadina ny fikarohana vaovao ataon'ny Deep fahalalana Group, manaparitaka ny angon-drakitra avy amin'ny Covid-19 Risk and Safe Assessment momba ny fitoniana ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-pahasalamana an'ny firenena sy faritra 250 miaraka amin'ny valin'ny Index Henley Passport.
Raha vao nanomboka ny 2021, ny valiny farany azo avy amin'ny Henley Passport Index - ny laharana voalohany amin'ny pasipaoro rehetra manerantany araka ny isan'ny toeran-kaleha azon'ny tompony aleha nefa tsy manana visa mialoha - manome fomba fijery mahavariana momba ny hoavin'ny fahalalahan'ny dia amin'ny tontolo iray izay manana novaina tamin'ny vokatry ny areti-mandringana Covid-19.
Tsy mihevitra ny fameperana vonjimaika i Japon fa manohy mitazona ny laharana voalohany amin'ny index, miaraka amin'ireo tompona pasipaoro afaka miditra amin'ireo toerana 191 manerana izao tontolo izao tsy misy visa. Manamarika ity ny taona fahatelo nifanesy nitazanan'i Japana ny toerana voalohany, na izy irery na niaraka tamin'i Singapore. Ny firenena Asia Pacific (APAC) dia manjaka amin'ny index - izay mifototra amin'ny data manokana avy ao amin'ny Fikambanana iraisam-pirenena fitaterana rivotra (IATA) - toa mafy orina ankehitriny. Singapore dia eo amin'ny laharana faha-2, misy fidirana amin'ny toerana 190, ary Korea atsimo kosa dia eo amin'ny laharana faha-3 miaraka amin'i Alemana, izay samy manana isa tsy misy visa / visa-tonga amin'ny 189. Somary nidina ambany ihany nefa mbola eo amin'ny 10 voalohany, New Eo amin'ny laharana faha-7 i Zealand, miaraka amin'ny fidirana maimaimpoana visa mankany amin'ny toeran-tany 185, raha eo amin'ny laharana faha-8 kosa i Aostralia, miaraka amin'ireo tanjona 184.
Ny fiakaran'ny firenena APAC amin'ny laharana Henley Passport Index dia tranga vaovao. Nandritra ny tantara nandritra ny 16 taona ny index, ny toerana ambony dia notazonin'ny firenena EU, UK, na Etazonia, ary ny manam-pahaizana dia nilaza fa hitohy ny toerana misy ny faritry ny APAC satria misy ny firenena voalohany nanomboka ny fizotran'ny sitrana tamin'ny areti-mandringana.
Miaraka amin'i Etazonia sy Angletera mbola miatrika fanamby goavana mifandraika amin'ny viriosy, sy ny tanjaky ny pasipaoron'ny firenena roa tonta izay miharatsy hatrany hatrany, dia miova ny fifandanjan-kery. Tao anatin'izay fito taona lasa izay, ny pasipaoro amerikana dia nidina hatramin'ny isa voalohany ka hatramin'ny 7th toerana, toerana zarainy amin'ny UK amin'izao fotoana izao. Noho ny faneriterena mifandraika amin'ny areti-mifindra, ny mpitsangatsangana avy any Angletera sy Etazonia dia miatrika fameperana lehibe avy amin'ny firenena mihoatra ny 105 amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ireo manana pasipaoro amerikana afaka mandeha any amin'ny toerana tsy latsaky ny 75, raha toa ka manana latsaky ny 70 ny isan'ny manana pasipaoro UK ankehitriny.
Dr. Christian H. Kaelin, Filohan'ny orinasa mpanolotsaina fonenana sy zom-pirenena Henley & Mpiara-miasa ary ny mpamorona ny hevitra momba ny pasipaoro dia nilaza fa ny laharana farany dia manome fotoana hisaintsainana ny fikomiana tsy manam-paharoa nampiavaka ny taona 2020. "Vao herintaona lasa izay ny famantarana rehetra dia ny fiakaran'ny vidin'ny fivezivezena eran-tany, mitombo, ary ireo manana pasipaoro mahery vaika dia hahazo fidirana bebe kokoa noho ny teo aloha. Ny fanidiana manerantany dia nanilika ireo vinavinan'ireto mamirapiratra ireto, ary rehefa manomboka miakatra ny fameperana, ny valin'ny index farany dia mampatsiahy ny tena dikan'ny fahefan'ny pasipaoro ao anatin'ny tontolo iray izay tohanan'ny areti-mifindra. "
Tamin'ny vaksinin'ny Covid-19 voalohany nankatoavina vao iray volana lasa izay, mino ny manam-pahaizana momba ny indostrian'ny seranam-piaramanidina fa ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao alohan'ny fitsangantsanganana an-habakabaka dia mety ho filana maika. Fanavaozana teknolojia kasaina hatomboka amin'ny Q1 2021 izay handray anjara amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena manerantany Fandraisana andraikitra IATA's Pass Pass - rindranasa finday iray ahafahan'ny mpandeha mitahiry sy mitantana ny fanamarinana voamarina ho an'ny fitsapana na vaksinin'ny Covid-19.
Ny famerenana tsara dia manome lalana ny fifindra-monina manaraka tsara
Manome soso-kevitra ny manam-pahaizana fa raha ny resaka fivezivezena manerantany dia tsy azontsika antenaina ny fiverenana amin'ny lamina mialoha ny pandemika. Dr. Parag Khanna,mpanoratra be mpividy (Ny ho avy dia aziatika) ary ny Mpanorina sy Mpitantana mpiara-miasa amin'ny FutureMap any Singapore dia nilaza fa tsy hiverin-dàlana fotsiny ilay rafitra, ary ny zom-pirenena irery dia tsy ampy hiantoka fandefasana azo antoka. "Na dia ho an'ireo pasipaoro mbola matanjaka toa an'i Japon, Singapore, Korea atsimo, ary ireo mpikambana ao amin'ny EU aza, dia misy protokol fanampiny takiana mba hahatratrarana ny fivezivezena tsy miovaova." Raha mijery lavitra, dia nanolo-kevitra i Khanna fa ny fanovana demografika dia mety hitondra fiovana manaitra kokoa: "Ny tanora ankehitriny dia mahatsapa ara-piaraha-monina, mahalala tontolo iainana ary tsy dia tia tanindrazana - izany rehetra izany dia mahatonga azy ireo ho ilay taranaka finday indrindra amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Nanambara ny fiovan'ny fivezivezena ara-potoana izy ireo, tsy ho firenena ho azy intsony ho an'ny olona ho azy. "
Fivoarana lehibe kokoa toa an'ity no resahina ao amin'ny Global Mobility Report 2021 Q1 navoakan'i Henley & Mpiara-miasa anio Ilay tatitra, izay misy ny fanadihadiana farany sy ny hevitry ny manam-pahaizana ambony sy ny manam-pahaizana momba ny matihanina, dia mampiseho fa na dia mety namepetra vetivety aza ny areti-mifindra tetezamita, ny faniriana hifindra sy hifindra monina sisa tavela, miaraka amin'ny olona hitodika any amin'ny vahaolana mamorona hiarovana ny tombontsoany manerantany amin'ny ny vanim-potoana taorian'ny Covid.
Maneho hevitra momba ny fironana mihombo mankany amin'ny fahazoana zom-pirenena faharoa, Profesora Peter J. Spiro, Charles Weiner Profesora misahana ny lalàna ao amin'ny University University Law School, dia nilaza fa ny areti-mandringana dia "nanaporofo ny fikorontanana voalohany tamin'ny rafitra fivezivezena taorian'ny fanatontoloana", ary izany dia "hanafaingana ny fironana efa nisy teo amin'ny fahazoana zom-pirenena rehefa jerena ny sangany ambony hiantohana amin'ny tranga tsy ampoizina amin'ny ho avy ”.
The Global Mobility Report 2021 Q1 manasongadina ihany koa ny fikarohana vaovao nataon'i Vondrona fahalalana lalina, mandrakotra angona avy amin'ny Fanombanana ny risika sy ny fiarovana ny Covid-19 ny fitoniana ara-toekarena, sosialy ary fahasalamana ireo firenena sy faritra 250 misy ny farany Henley Passport Index valiny. Ny mipoitra dia ny an'ny firenena mandroso sy mivoatra, ny fahalalahana manao dia lavitra dia tsy vokatry ny tsy fisian'ny fahalalahana ara-tsosialy na ny fivelarana ara-toekarena mahantra fa koa ny tsy fahombiazan'ny fitantanana risika, ny fahavononan'ny fahasalamana ary ny fanaraha-maso sy ny fikarohana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tsy fahalavorariana manerantany dia tsy ny fahorian'ny olom-pirenena any amin'ny firenena tsy dia mandroso intsony.
Miresaka momba ny fiantraikan'ny valanaretina amin'ny famindra-talenta, Greg Lindsay, Talen'ny Fikarohana Applied ao amin'ny NewCities, dia manondro ny fiakaran'ny antsoina hoe 'nomad nomerika'. “Ilay moniker dia mamaritra tsara ny olona manana adidy avy any Covid hiasa na aiza na aiza - ary olona an'arivony, raha tsy an-tapitrisany, no manenjika arak'endrika arak'endrika amin'ny toerana nofidiny. Mazava ny porofo, ao anatin'izany ny isan'ny Amerikanina mitady olom-pirenena faharoa amin'ny taona 2020, ary ny britanika mihazakazaka mitazona ny fidirana eoropeanina alohan'ny Brexit. ”
Etihad Guest dia manolotra fahalalahana bebe kokoa mandritra ny areti-mandringana COVID-19
Mijanona ao amin'ny Marriott ho an'ny tsara